प्रशान्त ताम्राकार ः ‘ऐश्वर्य’का ‘पावरफूल भिलेन’ | Jukson
पोखरा, ०५ कात्र्तिक
भिलेन अर्थात् गुण्डा भनेको के हो ? फिल्मको पर्दामा प्रस्तुत भए अनुसार सधै अरुलाई दुःख दिने, सबै कुरा आफ्नो पक्षमा बनाउने र डरलाग्दा कामहरु गर्नेलाई भिलेन भन्ने गरिन्छ । वर्षौदेखि भिलेनको यो परिभाषा बदलिएको छैन । केही वर्ष अगाडिसम्म फिल्मको पर्दामा गुण्डाको भूमिकामा सुनिल थापा, टिका पहारी, राजेन्द्र खड्गी बाक्दै देखिन्थे ।
पछिल्लो समय अनुप विक्रम शाही, प्रज्वल सुरज गिरी लगायतका केही कलाकारले भिलेनको परिभाषा नै बदलिदिएका छन् । भिलेन भनेको डरलाग्दो अनुहार भएका व्यक्ति मात्र होइन चकलेटी अनुहारका दमदार भिलेनको इन्ट्री विस्तारै नेपाली फिल्ममा बढ्दै गएको छ । यही भीडका एक व्यक्ति हुन्, प्रशान्त ताम्राकार ।
हुनत, यसअघि प्रशान्तलाई दर्शकहरुले ’मुखौटा’, ’सम्बोधन’ लगायतका केही फिल्ममा देखिसकेका थिए । तर, दर्शकमाझ प्रशान्तको गतिलो छाप बन्न सकेको थिएन । अब उनी अभिनित नयाँ फिल्म ’ऐश्वर्य’ कात्तिक ९ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो फिल्मको टीजर, ट्रेलर र एक गीत रिलिज भैसकेको छ । टीजर र ट्रेलरमा देखिएको प्रशान्तको पावरफूल भूमिकाले अहिले ’ऐश्वर्य’ नै दर्शकमाझ प्रतिक्षीत बनेको छ ।
ट्रेलरमा उनले बोलेको ‘मलाई त्यो ऐश्वर्य चाहिएको छ’ भन्ने डाइलग यतिबेला खुबै चर्चामा छ । ट्रेलरबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने फिल्ममा ऐश्वर्य उर्फ दीपिका प्रसाईलाई पाउन रमेश उप्रेती र प्रशान्त ताम्राकारको महासंग्राम हुनेछ । फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएपछि अहिले दर्शकहरुले प्रशान्तलाई ‘ह्यान्डसम भिलेन’को उपनाम दिएका छन् । फिल्ममा उनले ‘राघव’ को भूमिका निर्वाहा गरेका छन् ।
सुदीप बरालले खिचेको यो फिल्ममा रमेश उप्रेती, प्रशान्त ताम्राकार, दीपिका प्रसाई, केकी अधिकारी, निर्मल शर्मा, अर्जुन श्रेष्ठ, केशव भट्टराई, विकास खतिवडा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । रमेश उप्रेती प्रस्तुतकर्ता रहेको यस फिल्ममा अर्जुन श्रेष्ठ र किरण राणा उप्रेती निर्माता रहेका छन् । फिल्मका लेखक तथा निर्देशक दीवाकर भट्टराई हुन् ।
परिणीति चोपडाले २८ किलो तौल कसरी घटाइन्?
सलमान र यूलियाबीचको प्रेममा फेरि आइन् कट्रिना
संसदमा केपी ओलीको सम्बोधन (LIVE) भिडियो
मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिल्ली जाने, सरकारले वार्ता भाँड्न खोजेको आरोप
सेयर बजारमा १३ वर्षपछि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई अलग्याइँदै, लघुवित्तको अलग्गै समूह बनाउने तयारी
लोकतन्त्र मेला आयोजना हुने
इपिएल : विराटनगरलाई जित्नै पर्ने दबाब